Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo Hay’adaha ku shaqada leh Siyaasadda dalka oo shir ku leh Muqdisho – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Hay’adaha ku shaqada leh Tubta Siyaasadda loo dhanyahay iyo Guddiga Farsamo ee Wadaxaajoodka Arrimaha Federaalka ayaa shir wadajir ah oo wadatashi qorshe wadaag ah uga bilowday magaalada Muqdisho, kulanka oo socon doono afar maalin ayaa waxaa furay Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Xasan Cali Kheeyre.
Shirka oo ay si wadajir ah u qabanqaabiyeen Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee XFS ayaa intuu socdo looga hadli doonaa horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyay arrimaha Dastuurka, Federaaleynta dalka iyo Doorashooyinka.
Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo furitaankii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in arrimaha dib-u-eegista Dastuurka laga gaaray guulo horudhac ah.
“Sidaad ogtihiin waxaa dalka ka socdo dib-u-eegista Dastuurka, Wasaaradda iyo Guddiyada u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka waxay ilaa iyo hadda qabteen howlo taariikhi ah sida Shir-weynihii Qaran iyo in la guda galo dib-u-eegista Dastuurka oo ah mid ka qeybgalkiisa loo dhanyahay” ayuu yiri Wasiirka.
Ra’iisulwasaaraha XFS oo furay shirka ayaa bogaadiyay Hay’adaha dowladda ee shirka wadajirka ah leh.
“Shirkan waa mid muhiim u ah mustaqbalka dalka, ogaada waxa aad ka doodeysaan waa aayaha dadka Soomaaliyeed oo aan doneyno in la gaarsiiyo horumar. Waxaan rajeynayaa in dhamaadka shirka ay ka soo baxaan talooyin wax ku ool ah” ayuu yiri Mudane Xasan Cali Kheeyre.
Ugu dambayn, Khubaro ka kala timid dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo xubno matalaya Dowlad Goboleedyada ayaa guda galay ka doodista arrimaha Dastuurka, Federaalka iyo Doorashooyinka.
Wafdi ay hoggaamineyso Wasiirka Dekedaha Soomaaliya oo gaaray Hobyo